ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး (Drill)ဖောက်စက် - BaganMart
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ကခငျြပွညျနယျ ကယားပွညျနယျ ကရငျပွညျနယျ ခငျြးပွညျနယျ စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး တနင်ျသာရီတိုငျးဒသေကွီး ပဲခူးတိုငျးဒသေကွီး မကှေးတိုငျးဒသေကွီး မန်တလေးတိုငျးဒသေကွီး မှနျပွညျနယျ ရခိုငျပွညျနယျ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ရှမျးပွညျနယျ ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး
အမြိုးအစား အားလုံး Beauty & Personal Care Packaging, Advertising & Office ကနျြးမာရေး နှငျ့ ဆေးဝါး
စကျမှု့လုပျငနျး နှငျ့ စကျမြား
စကျယန်တရား နှငျ့ အပိုပစ်စညျးမြား
ထုတျပိုးခွငျး နှငျ့ ပုံနှိပျခွငျး စကျမြား
ပလကျစတဈ နှငျ့ ပီဗှီစီ
အတိုငျးအတာ နှငျ့ ခှဲခွမျးစိတျဖွာသော စကျမြား
ဓာတုဗဒေ စကျမြား နှငျ့ ပစ်စညျးကိရိယာမြား
ကရိနျး ရောငျးခခြွငျးနှငျ့ ဝနျဆောငျမှုမြား
သတ်ထုနှငျ့ စတီးလျ ပစ်စညျးမြား
ပိုကျနှငျ့ လစေုပျစကျ ပစ်စညျးမြား
ကဘေယျလျ နှငျ့ နနျးကွိုးမြား
မျောတာ၊ ဒိုငျနမို နှငျ့ ထရနျစဖျောမာမြား
လုံခွုံရေးနှငျ့ အန်တရာယျကငျးရှငျးရေး ပစ်စညျးမြား
ကနျြးမာရေး နှငျ့ ဆေးဝါး
Gift Customizing Services
အမြိုးအစားတူသော ကုနျပစ်စညျးမြားကို သငျနှဈသကျလြှငျ
Dewalt DCH253N 18V XR li-ion SDS+ Rotary Hammer Drill (Body Only)
Concrete Mixer Motor and Engine
Blaine fineness apparatus
ကွညျ့ရှု့သူ အရအေတှကျ : 1081 view counts
အနညျးဆုံး အရအေတှကျ : 1 Piece(s)
Brand : Rocket
Model : PPT 01
လုပျငနျးအမညျ : PIONEER(POWER TOOLS COMPANY LIMITED) Unverified Member
ဖုနျးနံပါတျ : 09-73167156 , 09-253634445 , 09-257592325 , 09-253634441
နရောဒသေ : ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး
Login to Contact
အသုံးပြုသောနေရာ : ဆောက်လုပ်ရေးသုံးစက်ပစ္စည်း
Product Depth (in.) : 8.75 in
Product Width (in.) : 3.125 in
Product Height (in.) : 9.5 in
Maximum Speed (rpm) : 1700
Battery Power Type : Lithium Ion
Battery Size : Lithium Ion
Power Tool Product Type : Cordless
Cordless Tool Type : Drill/Driver
Voltage (volts) : 18
Tools Product Type : Power Tool
Pioneer ကုမ္ပဏီမှတင်သွင်းသော ဖောက်စက်(drill)ကို လူကြီးမင်းတို့ ၏နေအိမ်အဆောက် အအုံများပြန်လည်ပြုပြင်ရာတွင်လည်းကောင်း ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များတွင်လည်း အသုံးပြုသော ဆောက်လုပ်ရေးသုံးစက်ကိရိယာ တစ်မျိ်ုးလည်းဖြစ်ပါသည်။သုံးစွဲရလွယ်ကူ သည့်အပြင် ခိုင်ခံ့သောကိုယ်ထည် လှပသောဒီဇိုင်းရှိသော drill ဖောက်စက်ကို လူကြီးမင်း တို့ စိတ်တိုင်းကျ အသုံးပြုနိုင်သော စက်ပစ္စည်းကိရိယာတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေနှင့် drill ဖောက်စက်ကိုအသုံးပြုလိုပါက Pioneer(Machinery & Power Tools) ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိ်ုင်ပါသည်။
Pioneer(Power Tools)Center သည် စက်နှင့်စက်ပစ္စည်းကိရိယာအမျိုးမျိုးတို့ ကို တင်သွင်းရောင်းချသောကု မ္ပဏီဖြစ်ပါသည်။လူကြီးမင်းတို့ ၏နေအိမ်အဆောက်အအုံများ ပြန်လည်အလှဆင်ပြုပြင် မွမ်းမံရာတွင်အသုံးပြု ရန်လိုအပ်သော စက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အဆောက်ဦးနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွင် အသုံးပြုရန်လို အပ်သော စက်များနှင့်အခြားသောစက်ပစ္စည်းများ ၊ကျောက်စက် ၊ဖောက်စက် ၊ဖြတ်စက်အမျိုးမျိုး ၊ဝရိန်ပုံးနှင့် ဝရိန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုး ၊စက်ရုံ အလုပ်ရုံသုံးဖော့ကလစ်လှည်းအမျိုးမျိုး ၊လက်သမားသုံး ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတို့ ကို Pioneer(Power Tools)ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် လက်လီလက်ကား ရောင်းချပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဒါ့ကြောင့် လူကြီးမင်းတို့ အနေနဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုရန် လိုအပ်သော စက်နှင့်စက် ပစ္စည်းကိရိယာအမျိုးမျိုးကို ဆက်သွယ်မှာယူလိုပါက Pioneer(Power Tools)ကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်မှာယူနိုင် ပါသည်။
Related Products For This Supplier
သိမ်းဆည်းရလွယ်သော အလူမီနီယံ ခေါက်လှေကား
ဆောက်လုပ်ရေးသုံးပစ္စည်းသယ်လှည်း factory cart
ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် စက်မှု့ လုပ်ငန်းသုံး ဝရိန်း ဆော်စက် ( inventer Welding Machines )
ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ဦးခေါင်းနှင့် မျက်စိ အကာကွယ် ပစ္စည်း ဦးထုပ် ( Auto-darken welding helmet )
အရည်သွေးကောင်းမွန်သည့် ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် စက်မှု့ လုပ်ငန်းသုံး လေမှုတ်စက် ( Air Compressor )
ရောငျးသူထံ message ပို့ရနျ
× Error! A problem has been occurred while submitting your data.
Subject Interest In
၀ယျယူလိုသညျ့ အရအေတှကျ Piece(s)
× Success! Your quotation request has been sent successfully.
For ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး (Drill)ဖောက်စက်
Approximate Quantity Needed Piece(s)
May I get the quotation for "ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး (Drill)ဖောက်စက်" ?
BaganMart အကွောငျး ဝကျဘျဆိုဒျ မွပေုံအညှနျး ဆကျသှယျရနျ အမေးအဖွကေဏ်ဍ
ပွညျတှငျး စီးပှားရေးသတငျးမြား ပွညျပ စီးပှားရေးသတငျးမြား Marketing ဆောငျးပါးမြား Management ဆောငျးပါးမြား
Buying Offers ရှာခွငျး ရောငျးလိုသောကုနျပစ်စညျးကို ဖျောပွခွငျး ရောငျးသူကိုရှာရနျ ဝယျလိုသောကုနျပစ်စညျးကို ဖျောပွခွငျး
copyright © 2018 www.baganmart.com. All right reserved. | Terms and Conditions | Blog